पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केबुलकार दशैंमै शुरु हुने, कति लाग्छ शुल्क ? - PokhareliNews
Home/main text 2/पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केबुलकार दशैंमै शुरु हुने, कति लाग्छ शुल्क ?
पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केबुलकार दशैंमै शुरु हुने, कति लाग्छ शुल्क ?
PokhareliNews Send an email4weeks ago
पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटकीय गन्तव्यमा अब केबुलकार पनि थपिने भएको छ ।
अन्नपूर्ण केबुलकार सञ्चालन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण समयमै काम हुन नसकेपनि अब भने सञ्चालन हुने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
अब ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै काम बाँकी भएको र दशैं र तिहारमै सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको कम्पनीका महाप्रबन्धक दिनेश पौडेलले बताउनुभयो । उहांले भन्नुभयो ‘जापानबाट प्राविधिक आएपछि सञ्चालन हुन्छ ।’
केबुलकार सञ्चालनका लागि जापानबाट आउनुपर्ने प्राविधिकहरु जापानमा लकडाउन भएका कारणले आउन पाएका छैनन् । उनीहरु आएर १० देखि १५ दिनभित्र बाँकी काम सकाएपछि परीक्षण शुरु गरिने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहांका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको सम्पूर्ण काम सकिएको छ । अब प्राविधिक पक्षको केही काम बाँकी छ । जापानमा लकडाउन थप नलम्बिए प्राविधिकहरु सेप्टेम्बर महिनाभित्रै नेपाल आइपुग्नेछन् र बाँकी काम सकिनेछ ।
फेवातालको किनारादेखि सराङकोटसम्म पुग्ने केबुलकार २ हजार २७५ मिटर लम्बाइको हुनेछ । जसमा १३ वटा टावर रहनेछन् भने १८ वटा गोण्डुलाले यात्रु ओसारपसार गर्नेछन् ।
२ किलोमिटरको दूरी पार गर्नका लागि ८ मिनेटको समय लाग्नेछ । एउटा गोण्डुलामा बढीमा ९ जनाका हिसाबले १४४ जनाले एकैसाथ यात्रा गर्न सक्नेछन् ।
केबुलकार सञ्चालन भएपछि विशेष गरी पोखराबाट सराङकोटमा सूर्योदय हेर्न जानेका लागि सहज हुनेछ । त्यसका लागि केबुलकार विहान ५ बजेदेखि नै सञ्चालन गरिने गरी योजना कम्पनीको छ । सराङकोटबाट अन्नपूर्ण हिमालको रेञ्ज र माछापुछ्रे हिमालसँगै फेवातालको मनोरम दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिनेछ ।
केबुलकारमा यात्रा गर्दा हिमाल, ताल, हरियाली वन जंगल तथा पोखराको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ । कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा दैनिक १५ सय मानिसलाई सेवा दिन सक्नेछ । कम्पनीले भविष्यमा ३५ वटासम्म गोण्डुला सञ्चालन गर्न सक्ने योजना बनाएको छ ।
कम्पनीले सेदीदेखि सराङकोटसम्ममा बीच बाटोमा तार मुनी पर्ने राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा अहिले स्थानीयसँग खरिद गरिसकेको छ । शुरुमा कम्पनीले उक्त जग्गाधनीलाई सेयरधनी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
हाल कम्पनीमा २० प्रतिशत लगानी स्थानीयबासी, १५ प्रतिशत जापानी लगानीकर्ता र बाँकी ६५ प्रतिशत लगानी कालु गुरुङ र उहांको समूहको लगानी छ ।
कम्पनीले केबुलकारका लागि नेपालीलाई ६ सय रुपैयाँ टिकटदर तोकेको छ । साथै सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई ७ सय रुपैयाँ र अन्य विदेशी नागरिकलाई ८ सय रुपैयाँको टिकट दर निर्धारण गरेको छ । क्लिमाण्डु
नयाँ एयरपोर्ट बनेपछि पोखरामा के हुन्छ अल्ट्रालाइट प्याराग्लाइडिङको भविष्य
आज पनि गण्डकी क्षेत्रमा मेघ गर्जन/ चट्याङ्ग सहित बर्षाको सम्भावना
विकास निर्माणमा स्थानिय नागरिकहरुको सहयोग अपरिहार्य ः मन्त्री थापा